Millennials iyo Omni-Channel Caadooyinka Shopping
Sida Loola Socdo Millennials + Caadooyinkooda Dukaamaysiga ee Omni-Channel
Thursday, April 24, 2014 Jimco, Abriil 25, 2014 Kelsey Cox
Iyada oo taleefannada casriga ah ay ku jiraan jeeb walba, Millennials-ku waa la qalabeeyay waxayna caadeysteen qaab cusub oo wax loo adeegto. Iyadoo ay ka badan tahay $ 200 bilyan awoodda wax iibsiga sannadlaha ah, Millennials waa koox muhiim ah oo wax loo qabanayo; laakiin intee in le'eg ayay tafaariiqlayaashu ka fiirsanayaan iyaga markay cusbooneysiinayaan xeeladahooda suuq-geynta?
In kasta oo Millennials ay wali ku raaxaystaan ​​wax soo iibsiga dukaanka, 85% waxay jecel yihiin inay u adeegsadaan aaladooda moobaylka baaritaanka alaabada ka hor intaadan wax iibsan. Tafaariiqleyda ka warqabta tan waxay ku hayaan joogitaankooda khadka tooska ah waxayna u isticmaalaan dib u eegista dantooda. 50% Millennials-ka ayaa booqan doona goobta tafaariiqlaha markii loo soo bandhigo qiimo dhimis 20% ah, hase yeeshee 72.7% dukaamada ayaan ku siinin tigidhada moobiillada macaamiishooda. Tafaariiqleyda, kuwaas oo ganacsigooda u keenaya mustaqbalka, iyagoo siinaya Millennials-ka istiraatiijiyadooda, waxay arki doonaan guusha ugu badan sanadaha soo socda. Bakhaarka Ganacsi daraasad ku sameeyay in ka badan 1,000 Milyan-laawayaal dukaameeysato iyo tafaariiqleyaal ah, iyagoo ku soo bandhigaya natiijooyinkooda xogtooda hoose.
Tags: millennialsomni-kanaaltafaariiqdacaadooyinka shopping
Khariidadda Caalamiga ah ee Ganacsiga E-Commerce
Tolmada: Amarka Mideysan iyo Maareynta Alaabada